अस्पतालमा माया बसेपछि छोराछोरीले गरिदिए बाबुआमाको बिहे – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/अस्पतालमा माया बसेपछि छोराछोरीले गरिदिए बाबुआमाको बिहे
एजेन्सी । माया बस्नलाई कुनै पट्टिकुलर ठाउँ चाहिंदैन । माया त माया हो । यो कहाँ, कतिबेला, कोसंग र कसरी बसिदिन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । यस्ले न जात हेर्छ । न त धर्म हेर्छ । न यस्ले उमेर हेर्छ न त यस्ले वर्ण र रंग नै हेर्छ । यस्ले कतिबेला मनमा सुटुक्कै मायाको साईनो गाँसिसकेको हुन्छ त्यो पत्तै हुँदैन ।
भारतको मध्यप्रेदशमा पनि यस्तै भएको छ । त्यो पनि उमेर पुगेका एक बृद्धबृद्धालाई । उक्त अस्पतालमा एक बृद्ध मानिस उपचार गर्न गएका थिए । उपचार गर्न गएका ती वृद्धलाई त्यहाँ पहिलैदेखि उपचारमा रहेकी एक बृद्धासँग माया बस्यो । यी दुईबीचको प्रेम देखेर उनीहरुले सन्तानले विवाह गरिदिए । दुलहाको उमेर ७० वर्ष छ भने दुलहीको ५५ वर्ष ।
ती ७० वर्षीय ओमबार सिंह जिल्ला अस्पतालमा भर्ना थिए । त्यति नै बेला उनको भेट ५५ वर्षकी गुड्डीबाईसँग भयो । तीन दिनपछि दुबैजनाले विवाह गर्ने निर्णय गरे । र उनीहरुले गरेको निर्णयलाई दुवैका परिवारले स्वीकार पनि गरे ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आमा श्रीदेवीको मृ,त्यु भएको केहि बर्षपछि छोरी जान्ह्बी कपुरलाइ लाग्यो यस्तो आरोप !
कोरोना त्रासका बिच दार्चुलामा स्क्रब टाइफसका पाँच जना बिरामी भेटिए
खुसीको खबर !! अब छोरी भएका घरमा सरकारले जोडिदिन्छ निःशुल्क इन्टरनेट
गुन्द्रुक र ढिँडो खाएर पालेको थिएँ ! तिमीले धोका दिएर के भो त
लकडाउनमा खानबस्न बोलाएर राखेकि ज्वाइँले नै सासुकाे यस्तो विभत्स ह’त्या गरेपछि…